MUUQAAL: Xukuumadda Soomaliland iyo Dagaalka Ceel-Afwayn dadka ay ku eedaysay iyo khasaarihii oo kordhay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Xukuumadda Soomaliland iyo Dagaalka Ceel-Afwayn dadka ay ku eedaysay iyo khasaarihii oo kordhay
Aug 13, 2019 - 6 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Somaliland oo maanta Warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeisa ayaa sheegay inay korodhay Khasaaraha ka dhashay Rasaastii ay dabley Hubaysan ku Furtay Dad ku sugnaa Gudaha deegaanka Ceel-Afwayn.
Waxay sheegeen in dhimashada guud ee Weerarkii ugu dambeeyay uu gaadhayo a 7-Ruux oo isugu jira 4 haween ah iyo 3 Dumar ah, Waxayna tacsi u direen Ehelada ay dadkaasi ka geeriyoodeen.
Wasiiradda ayaa sheegay in Dadkii kasoo Horjeeday Xaaladii degdega ahayd ee lagu soo Rogay Ceel-Afwayn hada Tallo looga baahan yahay.
Qurbajoogta Somaliland iyo Dad ku sugan gudaha Deegaanka ayuu ku eedeeyay inay ka dambeeyaan Colaada deegaanka ee soo Noq-noqotay.
Caqli ba’ay. Waa saansaantii burburka iyo halaagga.
ILAAAAHEEEY ma duleeyo qof muslim ah, hadii aysan iyago is duleen.
ILAAHOOWW KALA QABOOJE, ADAA WAX QABOOJIN KAREEE…
7-Ruux oo isugu jira 4 haween ah iyo 3 Dumar ah,???
Website idoor ah oo mid Murqaansan qoray baad soo xigateen .
Sidee nabad lagu heliyaa meel uu qof sameeyo wixii uu doono?
Walee in aan nabad iyo nolol la helidoonin ilaa ay dadka Somaliyeed runta wajahaan.
Inta uu qorigu gacanta u dhawyahay,nabadu way dheertay.
Ma jiro dhaca bilaa sobob.
Dawlad ayaa loo baahan yahay.
Dad xanuunsanaya ayaa loo raacay wixii ay rabeen ee ahaa,dawlad qabiil ah,.
Calan yar ayaa meel looga taagay,kaasi ayay caabudaan,laakiin nabad iyo nolol midna kuma haystaan kumana helidoonaan.
Mr bahal nin ciilan o ad dareemayso inay cuqdad dishay
Kolayba aduunyadan aynu joogno meel walba dhibku waa ka taaganyahay, Toronto ba habeen waliba dil baa ka dhaca, labadan week ee u danbeeyay ilaa 20 qof baa ku dhintay oo lagu dilay oo soomali ku jirto.
Waxbana lagama qaban karo qof ajashiisii dhamaatay oo dhimanayaa, wuxuun baa wanaagsan ooy tahay in dedaal laga sameeyo inaan qof kale dhiman.
Runtii dawlad iyo shacab na waa lagu dedaalay sidii mar walba loo joojin lahaa dhibkan soo noq noqday oo dedaal naguma yara.
Hadeerna waxaan filayaa oon rajaynayaa in degdeg loo dhamayn doonoo mashaqayooyinkaa soo noq noqonayaa ee ka dhaxeeyaa dadka walalaha ah!!
Alla ha kala qaboojiyo dadkaas muslimiintaa….
Runtii waa colaad xanuun badan….waa dad wada deggan magaalo iyo baadiye haddana cola….waa cabsi joogto ah ku nooloow…waxaa wanaagsan in colaadaas si islaanimo iyo soomaalinimo ah loo xalliyo…labadan beelood oo wada dega hadda muddo badan bay isdilayeen….waxay u egtahay in Soomaaliland dhowr isku day oo ay samaysay inay fashilmeen….waxaan soo jeedin lahaa in arrinta loo oggolaado in dhaqanka Soomaliyeed si guud u xalliyaan….oo aan Isaaq keliya laga sugin inay xalliyaan….tan kale arrintu sidan malaynayo siyaasad kama marna ee Soomaaliland arrinta xagga siyaasadda haka xalliso oo jabhadda Caarre halla heshiiso, waxaa laga yaabaa haddii siyaasadda la dajiyo in wax furfurmaan oo arrinta beelaha ay fure u noqoto…..yaan la sii fiirsan dhiiga baxaya ee si degdega wax ha looga qabto…..tan kale isku dhimashada dadka waxaan ka xanuunyarayn ciriiriga nololeed iyo cabsida joogtada ah ee ka dhalanaya deriska cilloobay…..war arrinta daacad hallaga noqdo hana loo hagar baxo xag siyaasad iyo xag dhaqanba…
Waa qormo xaleed oday Soomaliyeed ….